Naya Bikalpa | » बाढी र पैरोको कहरबाट आक्रान्त नेपाल बाढी र पैरोको कहरबाट आक्रान्त नेपाल – Naya Bikalpa
बाढी र पैरोको कहरबाट आक्रान्त नेपाल
प्रकाशित मिती: २०७६ असार ३०, ०९: ५३: ४६
(इन्जिनियर नयन मल्लको सफलताको कथासहित)
१. नर्वेको बसाइ पनि करिब तीन महिनाको हुँदा यसलाई लामै समय भन्ने मान्दा हुन्छ । हामी जस्तो मौसम र भूगोलमा बस्ने मानिसहरुलाई उत्तरी धु्रव र दक्षिणी धु्रवको वारेमा सुन्दा पक्कै नै कथा जस्तो लाग्छ पनि । मैले जब लेखेँ रातको १२ बजे घाम लाग्ने वा दिउँसो पनि घाम नलाग्ने देशको कथा, अनि मलाई ती साथीहरुले नबुझेझैँ गरी भने— रातको १२ बजे पनि कहीँ घाम लाग्छ ? अनि के शीर्षक राखेको भनेर मलाई एकजना मित्रले काठमाडौँबाट सोध्नुभयो रसिक पारामा । उहाँको मसँग कुरा गर्ने बहानामात्र थियो तर भित्र मनको कुराचाहिँ पोख्नुभयो हँसिलो तरिकाले । वास्तवमा रातको १२ बजे भनेको मध्यरात हो । समरको मौसममा अर्थात् वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौको मौसममात्र घमाइलो हुने रहेछ नर्वेमा ।
अझ जुन र जुलाई महिनामा नै हो रातको १२ बजे पनि उज्यालो देखिने र उत्तरी नर्वेमा घाम कहिल्यै नअस्ताउने । यी हरफ लेख्दा रातको ११ बजेको छ ओस्लोमा र बाहिर उज्यालो नै छ किनभने भर्खरै १० बजेर २८ मिनेटमा सूर्यास्त भएको छ । विहान ४ बजेर १५ मिनेटमा सूर्योदय भएको थियो । जुन २०, २१,२२तिरभन्दा त दिन करिब १५ मिनेट नै छोटो हुन थालेको छ । तर पनि अँध्यारोचाहिँ बाहिर देखिँदैन । सूर्य उत्तरायणमा छन्,उत्तरी धु्रवमा घाम अस्ताउँदैन भन्ने तथ्यको आधामा रातको १२ बजे मध्यरात हुने बेलामा पनि सूर्यास्त नहुने यही नर्वे देशमा नै हो । अनि यो समीक्षामा राती १२ बजे घाम लाग्ने देशको कथा भनेर शीर्षक दिइएको हो ।
२.कालो हिउँदमा घाम देखिँदैन, धुस्सिएको हुन्छ । दिन र रात भन्ने नै हुँदैन भने पनि हुन्छ । जसरी समरमा रात नभए जस्तै हो कालो हिउँदमा घाम नै हुँदैन । घामको अनुहार पनि देखिँदैन । जब हिउँ पर्न थाल्छ, सेतो हिउँद सुरु हुन्छ । त्यसबेलामा नर्वे हिउँ नै हिउँले छपक्क छोपिएको हुन्छ । त्यो बेलामा सबै रुखहरुबाट पात झरेर उजाड देखिन्छ । रुख सबै काठका कङ्काल जस्तै हुन्छन् । त्यो बेलामा नर्वे आउने कसैले कल्पना समेत गर्न सक्दैन कि नर्वेमा हरियाली पनि हुन्छ, घाम पनि लाग्छ र न्यानो दिन पनि देखिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ । तर अहिले नर्वे आउने वा ओस्लो आउनेले हिउँको कल्पना पनि गर्न सक्दैन, उजाड उजाड सहरको कल्पना पनि गर्न सक्दैन । सबैतिर हरियाली, विभिन्न किसिमका फूलहरु जताततै फुलिरहेका छन् ।
सहर नै फूलको बगैँचा जस्तै छ । घर घरमा फूल सजाएर राखिएका छन्, पार्कहरुमा फूल फुलाएर राखिएञका छन्, सहरका बीच बीचमा फूलहरु सजाएर राखिएका ठूला ठूला भाँडाहरु छन्, रङ्गी विरङ्गी फूलहरुले सहर, पार्क तथा सडक ढकमक्क छन् । नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय फूल मानेको गुराँस पनि विभिन्न रङमा पाइँदो रहेछ तर रातो गुराँस भने देखिएन । सेतो, गुलाबी, बैजिनी रङमा देखियो । जुनमा फुलेको गुराँस, अहिले जुलाईमा मुर्झाएको रहेछ ।
तर फूलहरु फुलेका छन् जताततै, मगमग बास्ना सहरैभरि आउँछ । हरियाली सहर, वातावरणमैत्री सहर, युरो ५को स्तरमा गाडीहरु गुड्छन्, झन रेल, मेट्रो, ट्रिक बिजुलीबाट चल्छन् । बाटोमा कुनै जाम छैन । पैदल यात्रीहरुका लागि प्रशस्त बाटो छ सडकका दुबै किनारामा । ट्राफिक सङ्केतको कतै अवहेलना गरिँदैन । जेब्रा क्रसिङमा पैदल यात्रुको खुट्टा पर्ने बित्तिकै बाहनहरु स्वतः रोकिएका हुन्छन् जहाँ ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गरिएको छैन ।
३. एउटा धार्मिक प्रसङ्ग—११ जुलाई अर्थात् २६ असारमा ानर्वेको मूल सडकमा भनौँ वा मुख्य चोकबाट हिन्दू धर्मको पक्षमा जुलुस निस्किएको थियो । यसको आयोजना इस्कोनले गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय श्रीकृष्ण समाज अर्थात् द इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्ससनेस ।
करिब ५००जति हिन्दूभक्तहरुको भेला थियो । १२ तारिखमा हरिशयनी एकादशी भएकाले पनि त्यसको पूर्व सन्ध्यामा श्रीकृष्णको नाम जपेर, हरेकृष्ण हरेरामको मन्त्र जपेर नर्वेको राजधानी ओस्लोमा धार्मिक जुलुससहित रथ यात्रासहित धार्मिक सभाको आयोजना गरिएको थियो ।
खासगरी भारतीय मूलका मानिसहरुको बढी संलग्नता देखिए पनि ओस्लोमा रहेका नेपाली, श्रीलंकाली, कम्बोडियालीहरुको उपस्थितिसँगै र नर्वेलीहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । टाउकोमा घना टुप्पी, जिउमा गेरुवा बस्त्र, हातमा बाजा बोकेका नर्वेलीहरुले कृष्ण नर्वेमा धार्मिक स्वतन्त्रताको वातावरण बनेदेखि नै हिन्दू मन्दिर पनि बनेका छन् र हिन्दूहरुको उपस्थितिमा धार्मिक कामहरु प्रशस्त हुने रहेछन् ।
विश्व हिन्दू परिषदको भाडाको कोठामा प्रत्येक आइतवार दिउँसो श्रीकृष्णका नाममा सत्सँग भएको पाइयो , त्यो पनि इस्कोनको आयोजनामा । ओस्लोमा नर्वेली शिक्षिका सनातनी माताको संयोजनमा धार्मिक सत्सँग हुँदो रहेछ । उनीहरुले हिन्दू धर्मको प्रचारका लागि र श्रीकृष्ण समाजको प्रबद्र्धनका लागि सँसद भवन अगाडि प्रत्येक हप्ता श्रीकृष्ण नाम कीर्तन गरेर समुदायलाई जागृत गराउँदा रहेछन् । आज यसवारेमा यत्ति मात्रै ।
४. अब नेपालीमूलका विज्ञ व्यक्ति वरिष्ठ इन्जिनियर नयन मल्लका वारेमा । आज नेपाली मूलका एयरपोर्ट तथा सडक विज्ञ इन्जिनियर नयन मल्लका वारेमा । एउटा नेपाली नर्वेको अन्तराष्ट्रिय हवाइ मैदानको निर्माणको डिजाइन र त्यसको निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने भनेको नेपाल र नेपालीका लागि गौरवको विषय हो ।
नर्वे अहिले विश्वको विकसित देशमात्र नभएर वातावरणको सुरक्षा र प्रबद्र्धनमा समेत विश्वको प्रख्यात देशमा पर्दन । खुसीको सूचकाङ्कमा विश्वमै तेस्रो मानिएको देश नर्वेको, विकसित र प्रविधिजन्य सँस्कारयुक्त देशमा एउटा नेपाली युवा २३ वर्षदेखि नर्वेको सडक र हवाइ मैदानसम्बन्धी काममा खटेर प्रतिष्ठा कमाएको सुन्दा र देख्दा कुनचाहिँ नेपालीलाई खुसी नलाग्ला र ।
५.ललितपुरको चाकुपाटमा माता कदमकुमारी र पिता कृष्णबहादुर मल्लका कान्छा छोरा नयन मल्ल २०२२ साल जेठमा जन्मनु भएको हो । पहिले सोभियत संघमा पछि युक्रेनमा परेको किभमा इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै एउटा पढाइकै सिलसिलाको करिब डेढ महिनाको तालिममा नर्वे आउनु भएका मल्लको तालिम अवधिमा गरेको प्रयोगात्मक कामबाट प्रभावित प्राध्यापकले उहाँलाई किभबाटै ओस्लोमा आउनका लागि प्रेरित गर्नुभयो र सन् १९९६ देखि उहाँ नर्वेमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ ।
नर्वे सरकारको सडक विभागमा बसेर १५ वर्ष काम गरेर वरिष्ठ इन्जिनियरको पदबाट राजीनामा दिनु भएका मल्ल हाल नर्वेको सडक र हवाइ मैदान निर्माणसम्बन्धी एक प्रतिष्ठित कम्पनी नोर कल्सल्टेन्सीको वरिष्ठ इन्जिनियरको पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँसमेतको एउटा टिमले हालको ओस्लोको अन्तराष्ट्रिय हवाइ मैदान (गार्डिमुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट)को एयर साइड र लाइन साइड दुवै साइडको निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी बनेको थियो ।
त्यही हवाइ मैदान जाने बाटोको मुख्य इ —६ बाट छुट्टिएर एयरपोर्टसम्म जाने आर भी १७४ बाटोको भागसमेतको निर्माणमा सहभागी रहनु भएका मल्ल अरु धेरै काम गरे पनि मुख्य यसैलाई मान्नुहुन्छ अहिलेसम्मको आफ्नो पेसाको उपलब्धि । ओस्लोबाट स्विडेन जाने बाटोको पहिलो खण्डको करिब २० किलोमिटर भागमा पनि आफ्नो दक्षता देखाउन पाएकोमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ ।
अबका दिनमा अरु चुनौतीपूर्ण हवाइ मैदान र राम्रा र बलिया सडक बनाउने आफ्नो विज्ञता रहेको उहाँले सगर्व बताउँदा खुसी लागेर आयो । उहाँले गरेका कामहरुको विवरण लामो रहेछ तर आफूलाई समेत सन्तोष लागेको र गर्व गर्न लायकको काम के हो भनेर सोध्दा त्यस्तो उत्तर दिनु भएको हो ।
६.पाटनको चण्डी विद्याश्रमबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेपछि आफ्नै घर छेउको इन्जिनियरिङ अध्ययन सँस्थानमा प्रवीणता प्रमाणपत्र इन्जिनियरिङमा गरेपछि नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा तत्कालीन सोभियत संघको युक्रेन स्थित किभमा स्नातक तहमा पढ्न आउनु भएका मल्लले पछि त्यहीँबाट नै इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको थियो । सुरुमा आउँदा सोभियत संघमा आउनु भएको मल्ल आफ्नो पढाइ समाप्त हुने बेलामा युक्रेन राज्य भएको बताउनु हुन्छ ।
७. हवाइ मैदान र राजमार्गको डिजाइन र निर्माणमा विज्ञ नयन मल्ल एउटा मिलनसार, घमन्ड नभएको र सामाजिक काममा लाग्ने प्राविधिक विद्वानको रुपमा ओस्लोमा नेपालीका बीचमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ जहाँ जानुहुन्छ, आफ्नो लगनशीलता र कार्य दक्षताले सबैको प्रशंसा पाउनु हुन्छ भन्ने कुरा ओस्लोमा रहेको नेपालीहरुको धारणा पाइन्छ ।
८.उहाँको दाजु डाक्टर नवीन मल्ल नर्वेकै युनिभर्सिटी अफ ट्रम्सोमा वरिष्ठ अनुसन्धाता हुनुहुन्छ, दिदी नगीना मल्ल आर्टिटेक्चर इन्जिनियर हुनुहुन्छ , उहाँकी बहिनी नयनतारा मल्ल नर्वेकै कलेजमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ भने उहाँँकी धर्मपत्नी स्मिता मल्ल समुद्रबाट तेल खोज्ने भूगर्भविद् हु्नुहुन्छ । उहाँको छोरो अलेक्जेन्डर मल्ल अहिले विद्यालयमा पढ्दैछन् ।
९.एउटा नेपाली उच्च विज्ञता प्राप्त गरेको प्राविधिकको रुपमा विकसित देशमा प्रतिष्ठा कमाइसकेको व्यक्तिले किन नेपालमा त्यस्तो विज्ञतालाई प्रयोग गर्नु भएन त भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो —२ वर्ष अघि नेपालको काठमाडौँ स्थित अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणमा आफ्नो विज्ञता देखाउन भनेर गएको पनि हुँ,तर खोइ के भनौँ, के मिलेन मिलेन, काम भएन र फर्केर आएँ । हेर्नुस्, पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने नर्वेमा धेरै आउँछ तर आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर गएको, आउनुस् पनि भनेर गएको तर हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रको कारणले कुरो मिलेन अनि म फर्केर आएँ ।
अझै आप्mनो मातृभूमिको सेवा गर्न मन छ , खासगरी सडकमा कसरी जाम कम गर्ने भन्ने मलाई थाहा छ । अझै काठमाडौँमा गाडीको चाप धेरै होइन, बरु ठाउँ ठाउँमा बढी चाप भएको कारणले त्यस्तो जाम भएको हो । वानेश्वर र जमलमा मात्र बाइपास बनाउने हो भने जाम नहुने बनाउन सकिन्छ जस्तो कि हाल कलङ्कीमा बाइपास बनाएपछि जाम कम भएको सुनेको छु । केही सडकहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
पैदल यात्रीहरुका लागि बाटो प्रशस्त दिनुपर्छ अनि सडकमा एकपटकमा एउटा गाडी जानेगरी बाटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाटो ठूलो बनाएरमात्र हुँदैन, गाडीका लागि बाटोको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीलाई त्यो प्रविधि थाहा छ ।अझै मातृभूमिले कामको जिम्मा दिएमा बाटोको व्यवस्थापन गर्ने इच्छा छ र मेरो विज्ञता अनुसारको काम पाउँदा आफ्नो जन्मभूमिको लागि किन नगर्ने र ? गरिन्छ । पैसा भन्दा ठूलो देशको इज्जत र विकास हो ।
१०.उहाँले अझ जोड दिएर भन्नुभयो—काम गर्ने वातावरणचाहिँ बन्नुपर्छ है । आफ्नो देशमा बसेर कसलाई काम गर्ने इच्छा हुँदैन र ? म त्यसै पनि वर्षमा एक वा दुई चोटि नेपाल गइरहन्छु देशकै मायाले त हो नि । नेपालको सडक र हवाइ मैदानको विकासमा केही त गर्नु नै छ, गर्छु पनि परिस्थिति मिलाएर ।
११.गैर आवासीय नेपाली संघ, नर्वे राष्ट्रिय समन्वय समितिका विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएका मल्ल त्यसमा सक्रिय रहनु भएको छ । हाल २०१९—२१का लागि ३१ अगस्टमा हुन लागेको निर्वाचनका वारेमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभयो—हेर्नुस्, निर्वाचनको सिद्धान्तले हो भने म अध्यक्ष निर्विरोध भइसकेको थिएँ तर साथीहरुले मिलेर जाने कुरा गर्नुभएकोले मैले मानेँ । अहिले मेरो धारणा भनेको सबै मिलेर जाने हो, यो समाजसेवा हो, स्वयंसेवी सँस्था हो ।
सबैले जे भन्नुहुन्छ या प्रजातान्त्रिक तरिकाले जसरी मिल्छ, म मिलेर जान तयार छु । तर मेरो एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, सबैले मिलेर जाने वातावरण भने बनाउनु नै पर्छ । हामी नेपालीहरु जहाँ रहे पनि नेपालका लागि हौँ है भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको हो, हामी नर्वेमा रहेका नेपालीहरु पनि नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका होँ ।
सबै साथीहरुको चाहनाअनुसार जाउँ भनेर नै मैले अघिल्लो पटकको निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्ने कुरामा मानेको हुँ । मलाई लाग्छ, सबै कुरा मिल्छ होला र निर्विवादरुपमा समाधान पनि निस्कन्छ होला । मलाई विश्वास छ, हामीले सुरु गरेको सँस्था हो , यसैबाट नेपालको हितमा कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामी सबै लाग्ने हो, मिलेर जाने हो, मिलेर काम गर्ने हो ।
१२.शालीन व्यक्तित्वका धनी र शान्तरुपमा प्रस्तुत हुने इन्जिनियर मल्ल नेपालको ट्राफिक जामका वारेमा बढी नै चिन्तित हुनुहुन्छ र त्यसको लागि आफूसँग प्रशस्त योजना र कार्यान्वयनको अनुभव भएको बारम्बार दोहो¥याउनु भएको थियो । सायद अबको नेपाल बसाइमा उहाँले यसबारेमा नेपाल सरकारसँग गैर आवासीय नेपाली संघमार्फत् आफ्ना योजनाहरु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिन सकिन्छ ।
१३. र अन्त्यमा, नेपालमा अहिले बाढीको कहर छ । देशबाट बाहिर बस्दा पनि देशकै वारेमा बढी चासो र चिन्ता हुने रहेछ । नेपालका पानी परेन, कसरी खेती गरिएला भन्ने चिन्ता थियो अघिल्लो हप्तासम्म भने अहिले बाढीको कहरले धनजनको क्षति जुन भएको छ , त्यसको चिन्ता लागेको छ । अझै बाढी र पैरोको सूचना सबै सङ्कलन हुन सकेको छैन, हुँदै होला । एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा सबैको सहानुभूति र सहयोगको जरुरत पर्छ । हिजो एउटा पास्नीको कार्यक्रममा नेपालीहरु भेट हुँदा सबैको चिन्ता भनेको नेपालमा बाढी र पैरोले भएको धनजनको क्षतिकै थियो ।
नर्वेजस्तो वातावरणीय सन्तुलनमा कडाइका साथ लागेको देशमा बसेका नेपालीहरु अहिलेको बाढीले खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा भएको बाढीको कहरलाई वातावरणीय परिणामभन्दा पनि मानवीय हेलचेक्र्याईँको परिणाम मानेका छन् । नदीको छेउछाउलाई मिचेर घर बनाउने र जङ्गल नास्ने कामले नै बाढी अनियन्त्रितरुपमा देखिएको हो भनेर चिन्ता गरिरहेका पाइन्थे र अब नेपाललाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने चिन्तामा थिए ।
नेपालका जुन जुन भागबाट नर्वे आउनु भएकाहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबै नै आप्mना ठाउँका वारेमा अद्यावधिक रहेको पाइयो । यसले के देखाउँछ भने तन जहाँ भए पनि मन त नेपालमा नै रहेको रहेछ । जजसको निधन भयो, उहाँहरुप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्दै घाइतको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै भएको क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
एउटालाई विपद् आइलाग्दा अर्को नेपालीले सहयोग गर्ने परम्परालाई यसपटक पनि सबैले उदत्त दिलले पीडितहरुलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । तर के कुरामा चाहिँ सजग हुनुपर्छ भने गाँस काटेर गरेको सहयोग असली पीडितसम्मचाहिँ पुग्नैपर्छ र त्यो सहयोग पनि अहिले बेलैमा पु¥याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ विभिन्न दलहरु र सामाजिक संस्थाहरु । सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, आफ्नाआफ्ना ठाउँबाट सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ । अनि भौतिक संरचनालाई पनि वातावरणसँग मिलान गर्नु पर्ने कुरामा हामी सबैले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२०७६ असार ३०, ०९: ५३: ४६